Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in duufaan jiilaal “saameyn leh” ay u soo guureyso gobolka ha | KWIT
Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in duufaan jiilaal “saameyn leh” ay u soo guureyso gobolka ha
By Halima Osman • Dec 28, 2020
Somali News 12.28.2020
Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in duufaan jiilaal “saameyn leh” ay u soo guureyso gobolka habeenka Talaadada iyo Talaadada.
Baraf dhexdhexaad ah ama culus ayaa la filayaa iyadoo 3 ilaa 7 inji ay u dhigan tahay Siouxland.
Sababtoo ah duufaanta jiilaalka ee soo socota, waxaa jiray xaalado deg deg ah oo baraf ah oo loo soo saaray beelo badan oo ka tirsan Siouxland, oo ay ku jiraan Sioux City, South Sioux, Dakota City, North Sioux, Hinton iyo Norfolk, Nebraska.
The Sioux City Journal ayaa soo warisay, Axadii waxay aragtay wadarta ugu yar ee hal maalin wadarta cudurada cusub ee COVID-19 in kabadan 2 ½ bilood oo ay kujiraan 17 kiis oo cusub. Maanta, waxaa jira 19 kale, oo wadar ahaan ka badan 12,000 tan iyo markii uu billowday cudurka faafa ee 163 dhimasho.
Isbitaalada ayaa si joogta ah ugu xajistay 55 bukaan oo ku yaal Sioux City labada xarumood ee caafimaadka. Taasi waa ku dhowaad kala bar rikoorkii sare ee la dhigay 1-dii Diseembar.
Heerka tijaabada ee 14-maalmood ee Gobolka Woodbury wuxuu aad ugu yaraanayaa 13.5%. Toddobaad ka hor, sicirku wuxuu ahaa 15%. Waqtigaan la joogo, waxaa jira nus dersin degmo oo waqooyi-galbeed Iowa ka sarreeya heerka 15%. Buena Vista County ayaa ugu sareysa waqooyi-galbeed Iowa iyo 6-aad ee gobolka oo leh 20.5%.
(Saraakiisha caafimaadka ee maxalliga ah waxay yiraahdaan hoos u dhig faafida COVID-19: maaskaro korka, masaafadaada iska ilaali, gacmaha iska dhaq, guriga iska joog markii aad jiran tahay, iskana ilaali shirarka aan muhiimka ahayn.
Mid ka mid ah maamulayaasha Tyson Foods ayaa shaqada looga eryay khamaar inta shaqaale ee qandaraas ku qaadan lahaa COVID-19 warshadooda doofaarka ee Iowa ayaa sheegay in barkadda xafiisku ay ahayd mid iska timid oo loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo niyadda. Maareeyihii hore ee habeenkii ee warshadda ku taal Waterloo, Iowa, ayaa sheegay inuu hadlayey isagoo isku dayaya inuu muujiyo in toddobada kormeere ee shaqada laga eryay "aysan ahayn dadka sharka leh" ee uu Tyson tilmaamay. Tyson wuxuu ku dhawaaqay joojinta maareeyayaasha Waterloo bishii Diseembar 16, toddobaadyo kadib markii eedeymaha khamaarka ay ku soo baxeen dacwado dil khaldan oo ay soo gudbiyeen qoysaska afar shaqaale oo u dhintay COVID-19.
Digniinta Blizzard ayaa loo dhajiyay dhammaan Siouxland Arbacadii baraf, xoog, dabayl iyo qabow dara
By Halima Osman • Dec 23, 2020
Digniinta Blizzard ayaa loo dhajiyay dhammaan Siouxland Arbacadii baraf, xoog, dabayl iyo qabow daran ilaa 9 fiidnimo. Waaxda saadaasha hawada ayaa sheegtay in magaalada Sioux City la filayay inay hesho seddex inji oo baraf ah.
Duqa Magaalada Sioux Bob Scott ayaa soo saaray xaalad deg deg ah oo baraf ah.
Baaqa deg-degga ah wuxuu mamnuucayaa dhigashada gawaarida ama ka tagida gaariga iyadoo aan lala socon dariiqa dariiqa barafka, oo ay ku qoran tahay calaamado buluug iyo cadaan leh baraf baraf wata.
By Halima Osman • Dec 22, 2020
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegay in kiisaska COVID-19 iyo isbitaalada la dhigaayo ay kusii jeedaan wadada. Waxay ku qanacsan tahay xayiraad dheeraad ah oo loo soo saaray Iowans bishii hore. Reynolds waxay ku boorineysaa dadweynaha inay raacaan tilmaamaha caafimaadka, oo ay ka mid yihiin ka fogaanshaha isu imaatinka inta lagu jiro fasaxyada.